Home > Products > LED Grow Light > Spyder LED Grow Light > DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုကြီးထွားစေသည်
DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုကြီးထွားစေသည်
ပုံစံ: MODEL S-8 BAR- H SERIES
1. Product Introduction of the DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုထွန်းလင်းစေသည်
ဒီ 800W Spyder LED သည် DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက်အလင်းဖြာသည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော LEDs၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော LED driver များနှင့်အရည်အသွေးမြင့် alumnium heatsink များပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အလင်းအဆင့်မြင့်ရန်လိုအပ်သောဆေးခြောက်နှင့်လျှော်စိုက်ပျိုးခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ ရောင်စဉ် LEDs ပေါင်း ၆၆၀nm အနီရောင် diodes များနှင့်လူသိများသော LED driver ကိုအသုံးပြုသည်။ ETL သည်အမေရိကနှင့်ဥရောပဈေးကွက်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးစာရင်းပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အများကြီးတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
၂။ 800W Spyder LED ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) သည် DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက်အလင်းကိုတိုးပွားစေသည်
ထုတ်ကုန်အမည်: 800W Spyder LED grow light for DIY greenhouse Light distribution: 120 °
မော်ဒယ်နံပါတ်။: LION-GL800WHS4-08MD-0101 Thermal management: Passive
မီးအိမ်အရွယ်အစား: 1084*1110*128MM မက်စ် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 50°C
အလင်းအရင်းအမြစ်: LED Function: 0-10V ဘူးသီးမှိန်
LED အရေအတွက်: (340W+16R) * 8 Mounting အမြင့်: >15cm above canopy
LED အမှတ်တံဆိပ်: Epistar Housing color: ငွေနှင့်အနီရောင်
AC input power: 277V @ 800W IP rating: စိုစွတ်သောနေရာ
Amperage: 2.89A @277V Life time: >50000 hours
LED driver အမှတ်တံဆိပ်:4* 200W Meanwell N. W.: 13 ကီလိုဂရမ်
စွမ်းအင်အချက် >0.9 လက်မှတ်: ETL, cETL, အီး, RoHS
PPF ထိရောက်မှု 2.8 µmol/J အာမခံချက် -5years
PPF: 2240 μmol / s ကို Packing size: 115*28*22cm
လွှမ်းခြုံမှု - ပန်းပွင့်ချိန်တွင် 5ft * 5ft Application: ဖန်လုံအိမ်, မိုးလုံလေလုံ, ဒေါင်လိုက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး
၃။ ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် 800W Spyder LED အသုံးပြုခြင်းသည် DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက်အလင်းရောင်တိုးစေသည်
DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုတိုးပွားစေသည်စီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီးစက်ရုံကြီးထွားမှုအဆင့်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖန်လုံအိမ်နှင့်မိုးလုံလေလုံဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးသောရောင်စဉ်သည်စက်ရုံကြီးထွားမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး passive cooling design သည်ဆူညံမှု၊ ပန်ကာများမအောင်မြင်ခြင်း၊ ထို့အပြင်၎င်းသည် superios PAR, PPF နှင့် PPFD များပို့လွှတ်သည်။
4. 800W Spyder LED ၏ကုန်ပစ္စည်းအရည်အချင်းသည် DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက်အလင်းရောင်တိုးစေသည်
The Warranty period on DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုထွန်းလင်းစေသည် is5years. For any defective sample orders (less than2pcs) during warranty period, we will provide you with the replacement ASAP and for mass defectives, we’ll send the replacement products in your next batch on agreed.
5. Delivering, Shipping And Serving of the DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုထွန်းလင်းစေသည်
Our DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုထွန်းလင်းစေသည် is well packaged with heavy duty materials so that it will not be worn or broken during transportation. For small or sample orders, we suggest Express Service by UPS, FedEx or DHL; For bulky orders, sea freight is more preferred.
6. FAQ of DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုထွန်းလင်းစေသည်
မီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃-၅ နှစ်အာမခံချက်ရှိသည်။ ဤကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှအရည်အသွေးပြproblemsနာများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အစားထိုးမှုကိုယူသွားပါမည်။
၂။ သင်စက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာရှိနမူနာများအတွက် ၂၄ နာရီအတွင်းနမူနာအသစ်ပြုလုပ်ရန် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း။
အမြန်ဖြင့် (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, etc)၊ လေ၊ ပင်လယ်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံလုပ်ခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
600 Watt LED သည် Spectrum အပြည့်ဖြင့်အလင်းကြီးထွားစေသည်
Full Spectrum 600W LED သည်ဖန်လုံအိမ်အတွက်အလင်းကိုကြီးထွားစေသည်
PPFD မြင့်မားသော 800 Watt LED သည် Cannabis အတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည်